DA-GP28001 fanariana vy mahandro sakafo avo lenta
Ny lapoaly fanendasa nentim-paharazana dia afaka mahandro tsy ara-dalàna, matetika dia miteraka hena koa. Manamboatra lapoaly miendrika tora-droa miaraka amin'ny vodin-taolana, ity vilany fandrahoana ity dia manampy anao handrahoana zavatra natsatsika toy ny kebab, paneer, legioma ary maro hafa ao anatin'ny minitra vitsy. Manampy amin'ny fanangonana tavy koa ny fototr'io vilany io. Matsiro sy maintso izy io.
Smart Design izay manambatra ny estetika miaraka amin'ny Functionality dia
manome antoka ny fitehirizana hafanana avo lenta, amin'izay manome fahombiazana lehibe mandritra ny fandrahoana sakafo. Mampiseho tantana ergonomika izay mijanona milay nefa ampiasaina eo amin'ny fatana
Ireo mpankafy an-kalamanjana dia aleony ny fomba fanaingoana sy fandrahoana sakafo betsaka; raha ny fonony kosa dia miverina ho toy ny tady boribory boribory lavalava. Ampiasao amin'ny lakozia any an-kalamanjana ity lakozia ity mba hanendasana trondro, akoho, peratra tongolo ary fries; na ampiasaina hanomanana sakafo koba iray na laoka na sakay. Ampodio ny sarony mivelatra mba hametahana sakafo maraina be dia be, burger, mofo sandwich ary fajitas! Ny fampiasana an-dakozia koa amin'ny fatana fandoroana roa. Na inona na inona toe-javatra mitranga, ny fandrahoan-tsakafo amin'ny Cast Iron Cookware dia manatsara ny tsiron'ny fiankinan-doha amin'ny gourmet anao.
Betsaka ny tombony azo avy amin'ny fandrahoana amin'ny fitaovana fandrahoana vy. Iray amin'ireo tombontsoa lehibe azo avy amin'ny fandrahoan-tsakafo miaraka amin'ny menaka kely vantany vao mahavita mamy tsara amin'ny lakozia ianao. Io dia mamela ny sakafo tsy matavy loatra ary ny menaka kely kokoa hahatratrarana crusty brown crust. Tombontsoa iray hafa koa ny fampiasana vy mahandro vy dia hanamafy ny sakafo ara-dalàna amin'ny vy. Ankoatr'izay dia safidy tsy misy simika amin'ny vilany tsy misy kitay vao haingana toy ny Teflon na Ceramic.
Fitaovana fandrahoana vy an'ny DA-GP32001 vita amin'ny sinoa
DA-GP38001 vy manipy DISA kalitao avo vita any Sina
Lakozia DA-GP28001 vita amin'ny varotra mafana any Sina 2020
DA-GP22001 vy vy DISA 2020 fivarotana mafana
DA-GP34001 / 34002 vy nariana DISA vita any Sina
DA-GP26001 vy lafo amidy 2020 varotra mafana
DA-GP27001 / 39001 lakozia fandrahoana vy 2020 amidy mafana
Lakozia DA-GP11001 / 13001/16001/18001 vita amin'ny varotra mafana any Sina 2020
DA-GP26002 / 31001 lakozia mpiorina tontolo iainana efa voaomana
DA-GP26003 mandefa vy mahandro fahandro lehibe